“उकाली ओराली “ – मझेरी डट कम
“उकाली ओराली “
सुख दु:ख भनेकै सम्बन्ध त हो नी । कोही मान्छेसँग सम्बन्ध गाँसिन्छ अनि सुरु हुन्छ यात्रा, दु:खको या सुखको । उनका दीनहरू आजकल गुलाफझैँ फुल्न थालेका छन् । मीठो सम्झना शीतल पवन बनेर कहिले काही अझैपनी सम्झिनै रहन्छे । आजभोली पनि बिगतका ती तितामिठा कुराको वर्णन गर्छिन नजिकैको समिपमा आएर “केसु” माया नमार है यो जुनीमा त हजुरकी सङगेनी हुन नसके अर्को जुनीमा हजुरकै हुने छु । सम्झना बिर्सना मनको त्रिसना बाड्ने दिन सपनामा मात्र बाँकी छन, मनले सोचेको पुरा हुनेभए त आज हामी दुई किनारा भई बस्नु पर्ने नै थिएन । दैबको लीला भनुकी भाग्य को खेल भनु हामी बीचको सम्बन्धले नजुराएपछी कस्को के नै लाग्छ र?
भन्थ्ये मान्छे ,प्रिथिबी गोलो छ रे कहाँ को मान्छे आज कहाँ आएर नाता जोड्न पुगेछु , मैलेनी ति सुन्दरीलाई मात्र देखेको थिए र? म आफै संग आँफै प्रश्न गर्न पुग्छु मात्र हाम्रो दुई दिने छेडिक माया केवल मेरो जिन्दकी मा आज न भएनी सपना की राजकुमारी “सानु” कै याद मा दिन बिताउन पुगेछु । मेरो कल्पना की “सानु” केवल कल्पना मा मात्र सिमित रहेजस्तो भयो केवल दिवा सपना भएछ, मेरा लागि उनि पनि आज कल त भन्छिन प्रिय “केसु” किन मलाई छोडी टाढा गएको? तर ति बितेका दिन सम्झ्दा आज नि पागलसरी दिन बन्न पुग्छन । भन्थे नी सकभर माया नलाउनु लाए पछी बीचैमा नछोड्नु ती भनाई नी आज मेरालागी निरर्थक भएका छन् केवल मेरी सपना की “सानु” को कारणले ।
“जीन्दगीको रीत भनौ या भाग्याको खेल”अनौठो र अबीश्वशियपुर्ण छ जिन्दगी ! यथार्थ बाश्तबिकता भन्दा धेरै पर छन हाम्रा कल्पना , सपना र चाहना हरु”तापनि मलाई बीश्वास छ जशरी हामिले हाम्रो माया लाई सफल बनाएका छौ त्यसरी नै हाम्रा सपनाहरु पनि यथार्थमा परिणत हुने छन अनि जता ततै शुखद खुशिको मिठो अनूभुतिले नयाँ जीबनको शृजना हुनेछ !!हामिबिचमा यति राम्रो शमझदारि र बिश्बाशका बाबजुद पनि समयले कीन यसरी कोल्टोफेर्यो कि आधा सपना तिमीले साथलग्यौ आधा सपनाहरुको बिवशता भित्र आज पनि म तिमीलाई खोजी रहेछु”!अनि आफ्नै मनले खोजेको जवाफ आखिर दोशी को ? तिमी “समय”या म ??
आजभोलीनी म सँग भेट मा भनछिन “केशु” म हजुर लाई कहाँ भुल्न सक्छु र? हजुर ले नि तेसो भनेर हुन्छ र मेरो पहिलो प्रेम भनेको नि हजुर नै हो । म अब आफ्नै मन ले कहिले नि अर्का को जिन्दकीको समिपमा आउने कोशीस गर्नेछैन मात्र “केशु” को जिन्दकी बाट मैले पाठ सिकिसके । जिन्दगी भरको लागि मैले मायापाइ सके मेरो यो बितेको जिन्दगी त हजुर कै भए पनि अर्को जूनीमा त हजुर कै जिन्दकीको शहयात्री भएर आउने कोशीस गर्ने छु । मात्र यो मायाको सागरबाट पंक्षियर सधैंसधैंको लागि हजुरकै अङगालोमा बस्ने प्रतिपदता गर्दै छु ।
हुन पनि हो, जस्तो लाग्छ मेरो जिन्दगी भर को “सानु” नभए पनि केही दिनको लागि भएनी मेरो जिन्दगीभरको लागि माया ममता दिएकी नै थीई । मनमा पिडा को भारी बोकेर अर्काको जिन्दगी उजाडन नचाहने मान्छे आजनि यो दुनियाँ मा रहेछन । माया सबै थोक रहेनछ केही त्यग पनि माया रहेछ भन्ने आज म मनमनै महसुस गर्दै छु । एक प्रबित्र माया गर्नेहरुमा अहिले तेही मोरी “सानु” मेरो साथी पर्छ भन्दा फरक नपर्ला । मेरो जिन्दगीमा आज भोली उन्को त्यो माया पाएर होला अहिले आफुमा “सानु” को कमी महसुस भई नै रहेको छ । म त भगवान सँग एही प्रथाना गर्छुकी मेरी “सानु” मेरो जिन्दगी भर ल्याईदिउन । केबल जिन्दकी भर छेडिक समयको लागि मात्र हैन मात्र “सानु” कै प्रतिछ्य मा बाँकी दिन साची राखेको छु ।